अजय सुमार्गीको सबै खाता रोक्का, राजश्व कार्यालयले बार्गेनिङ गरिरहेको खुलाशा ! | Diyopost
अजय सुमार्गीको सबै खाता रोक्का, राजश्व कार्यालयले बार्गेनिङ गरिरहेको खुलाशा !
मा प्रकाशित 514 पटक हेरिएको
काठमाडौं, ५ असार । अर्बपति व्यापारी अजयराज पराजुली (सुमार्गी)को सबै बैंक खाता रोक्का भएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय बानेश्वरको पत्रको आधारमा सुमार्गीको स्वामित्व रहेको सबै कम्पनिको खाता रोक्का गरिएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सुमार्गीको स्वामित्व रहेको नेपाल सेटलाइट टेलिकम प्रा.लीले चार अर्ब ३२ करोड कर तिर्नुपर्ने भन्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय बानेश्वरले पत्र काटेको थियो । तर, कर निर्काणको विषयमा चित्त नबुझेपछि सुमार्गीले कर निर्धारण विरुद्ध विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार आन्तरिक राजश्व कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारी सुमार्गीको खाता रोक्का गरेर ‘बार्गेनिङ’ मा लागेका छन् । ‘राजश्वका कर्मचारीले खाता रोक्का गरेर बार्गेनिङ गरिरहेका छन्,’ सुमार्गी निकट स्रोतले भन्यो,‘कर निर्धारण नै बदनियतको आधारमा गरिएको छ ।’
आन्तरिक राजश्व कार्यालय बानेश्वरले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा साइप्रसको एयरवेल सर्भिसेसबाट नेपाल स्याटेलाइटको स्वमित्व रहेको टेलियासोनेरालाई बेच्दा पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो । एसरवेलले टेलियासोनेरालाई ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा नेपाल स्याटेलाइटको शेयर बेचेको थियो । कार्यालयका अनुसार सोही किनबेचमा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपयाँ पुजीगत लाभ भएकाले त्यसको २५ प्रतिशत सुमार्गीले बुझाउनुपर्ने जनाएको थियो ।
१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर तथा त्यसको दोब्बर जरिवाना र ब्याज समेत गरी गत वैबाख ३१ गते चार अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो । करको पत्र बुझेपछि सुमार्गी कर निर्धारण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न पुगेका थिए । मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा कर कार्यालयले बैैंक खाता रोक्का गरेको जनाइएको छ । गत जेठ ७ गते सुमार्गीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय विरुद्ध प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए ।
‘राजश्व कार्यालयबाट प्रेषित विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर नभएको र अधिकारिकतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिँदा कहिँकतैबाट ह्याक भएको भन्ने हो भने त्यस्तो कार्यलाई खण्डन गर्नसमेत अनुरोध गर्दै अदालतसमक्ष दायर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अदालतसम्म विचाराधिन रहेको बिषयमा प्रभाव पर्ने र पार्ने किसिमको कुनै पनि कार्य नगर्नु हुन सादर अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
कर कार्यालय स्रोतका अनुसार सुमार्गीको स्वमित्वमा रहेको नेपाल स्याटेलाइट, मुक्ति श्री सिमेन्ट प्राली लगायत सम्पूर्ण कम्पनिको खाता बन्द गरिएको छ ।
हेलो मोबाइलमा साइप्रसको एयरबेल सर्भिस प्रालीको ७५ प्रतिशत शेयर रहेको थियो । एयरवेलको १०० प्रतिशत शेयर नै टेलियासेनेराले किनेको थियो । टेलियासोनेर त्यही कम्पनि हो जसले एजियाटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेचेर लाभकर नतिरी भागेको थियो ।
स्रोतका अनुसार हेलको नेपालको ७५ प्रतिशत शेयर किन्दा साइप्रसको एयरबेल प्रा.लीले ४ अर्ब ३२ करोड पुँजीगत लाभकर तिरेको छैन । गत वैशाख १६ गते आन्तरिक राजश्व कार्यालय बानेश्वरका कार्यालय प्रमुख लालप्रसाद पंगेनीले उक्त कर तिर्न पत्र काटेका थिए ।